Mpitarika ny fanamasinana ny fianakaviana
"Zaro amin'izay lalana tokony halehany ny zaza, ka na rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin'izany." - Ohab. 22:6.
Miantso ny ray aman-dreny aho mba hanomana ny tenany ary hanomana ny zanany hiray amin'ny fianakaviana any ambony. Mivonona ho an'i Kristy, mivonona hihaona amin'ny Tomponareo amim-piadanana. Manomboha miasa amin'ny lalana mahitsy ao amin'ny tokantranonareo. Midira ao amin'ny fototry ny olana. Ento ao an-tokantranonareo ny fahamarinana, mba hanamasina sy hanadio azy. Aza avela any ivelan'ny tokotany izany. Firifiry moa ireo milaza ny tenany ho Kristianina no hajambain'ny tombontsoan'ny tenany manokana? Tena tsy takatr'izy ireo mihitsy ny zavatra izay ho nataon'i Kristy ho azy ireo raha toa ka niditra tao an-tranon'izy ireo Izy. Aoka hiasa amin-kafanam-po mba hahazo ny satro-boninahitry ny fiainana ny Kristianina tahaka ny hiasany hahazo ny tombontsoan'ny tany ihany, amin'izay dia ho azo antoka fa handroso amin-kery ny fiangonan'Andriamanitra (...). Mitarika ho amin'ny asa mifanaraka amin'ny lalan'Andriamanitra ny Fanahy Masina. Ny asa manavaon'ny Fanahy Masina dia ho hita ao amin'ny fianakaviana izay miezaka mafy mba haneho fahalemem-panahy, faharetana ary fitiavana.
Eo am-perinasa ny hery tsitoha, manomana ny saina sy ny fo mba hilefitra eo ambanin'ny hery mamolavolan'ny Fanahy Masina, ka mitarika ny ray aman-dreny mba hanamasina ny tenany, mba hahamasina ihany koa ny zanany. Ny tokantrano misy Kristianina mahalala fomba, feno fanajana dia mandefa hery miasa mangina ho amin'ny tsara lehibe lavitra. Hamangy matetika ny tokantrano izay fehezin'ny sitrapon'Andriamanitra ny anjelin'Andriamanitra. Rehefa eo ambanin'ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra tahaka izany ny tokantrano, dia tonga toerana mamelombelona ho an'ny mpandeha ana sy torovana. Tsy mieboebo ny tena rehefa ambenana amim-pahamatorana. Voavolavola ny fahazarana tsara. Hajaina fatratra ny zon'ny hafa. Mijoro eo amin'ny familiana ny finoana izay miasa amim-pitiavana sy manadio ny fanahy, mitarika ny ankohonana iray manontolo. Rehefa eo ambanin'ny hery miasa mangina masin'ny ankohonana tahaka izany, dia tsapa sy ankatoavina malalaka ny foto-kevitry ny firahalahiana napetraky ny Tenin'Andriamanitra. —SW, 19 Janoary 1904.